Internet Movie Database. I-Internet Movie Database kuyinto u
ⓘ Internet Movie Database. I-Internet Movie Database kuyinto uhlu inthanethi yolwazi ezihlobene amabhayisikobho, izinhlelo zethelevishini, futhi isiqophi imidlalo ..
ⓘ Internet Movie Database
I-Internet Movie Database kuyinto uhlu inthanethi yolwazi ezihlobene amabhayisikobho, izinhlelo zethelevishini, futhi isiqophi imidlalo, ukungenisa abadlali, ukukhiqizwa crew, balingisi eqanjiwe, Umlandvomphilo, icebo emathebula, futhi okubalulekile. Izıhlabane kanye nezisebenzi besho bechaza ulwazi lomsebenzi wabo siqu futhi ulayishe izithombe yodwa imali unyaka ngamunye. Abasebenzisi be US angenza futhi babheke movie kuka 6.000 no zethelevishini abavela CBS, Sony, futhi ezimele ifilimu bakaleyisi ehlukahlukene.
Umkhankaso ngo-1990 ngu-professional computer Unicode Col Needham, inkampani sifakwa kwi-UK njengoba Internet Movie Database Ltd ngo 1996, nge imali ekhiqizwa ngokusebenzisa nokukhangisa, kwamalayisense, futhi ukubambisana. Ngo-1998, yaba osizayo of Amazon.com, ababezimisele ke bakwazi ukuyisebenzisa njengesilwane mthombo advertising ngokudayisa DVD kanye videotapes.